Brazil President Bolsonaro chọrọ iji tie iwu megide okike akụziri n'ụlọ akwụkwọ | Apg29
Brazil President Bolsonaro chọrọ iji tie iwu megide okike akụziri n'ụlọ akwụkwọ
School ụmụ ga-echedo si okike akụziri, na-ede na-President of Brazil Jaia Bolsonaro na Twitter.
Ọ bụghị ike ịghọta ihe mere na Brazil president Jaia Bolsonaro, dị ka US President Donald opi, na-ewu ewu n'etiti ndị Kraịst.
School ụmụ ga-echedo si okike akụziri, na President of Brazil, Jaia Bolsonaro, si na-achọ na Twitter. Ya ochichi ga-edo a ụgwọ na okwu.
"Iji chebe ụmụaka ụlọ akwụkwọ, m jụrụ Ministry of Education iji kwadebe a ụgwọ iji tie iwu megide okike akụziri n'ụlọ akwụkwọ elementrị," o dere na 3 September.
Isi Iyi: Twitter .
The aga dị na akara na ọnụ ọgụgụ Bolsonaro dị mgbe ọ ghọrọ president nke Brazil ..
"Anyị nwere ohere pụrụ iche n'ihu anyị wughachi mba anyị ... Anyị bụ otu ndị, chekwaa ezinụlọ, nkwanye ùgwù maka okpukpe na anyị onye Juu Kraịst ntọala, Iguzogide okike akụziri, chebe anyị ụkpụrụ," ka o kwuru, dị ka The Guardian.
Ọ bụghị ike ịghọta ihe mere na Brazil president Jaia Bolsonaro, dị ka US President Donald opi, nnọọ na-ewu ewu n'etiti ndị Kraịst. Na dị ka ya American counterpart, ọ bụghị nnọọ ewu ewu n'etiti ndị LGBT okirikiri na ekpe-liberals.
World ji mma akwụkwọ
Sunday School bụ ihe kasị mma n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na ụmụ! Ka ha na-aga Sunday school nke mere na ha ga-esi jide nke Jesus - ma ọ bụ kama nke ahụ, Jizọs na ha - ha ga-adị mma ma adabako site ndụ.